Maareynta Kiiska - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Adeegyada Caafimaadka > Maareynta Kiiska
Nidaam iskaashi oo wax ka qabta baahiyahaaga caafimaad ee shakhsi ahaaneed.
Waxaan qiimeyneynaa jawaabtaada!
Waa maxay Maareynta Dacwada?
Maareynta Kiiska micnaheedu waa inaad hesho taageero dheeraad ah xagga daryeelka caafimaadkaaga. Waa barnaamij loogu talagalay xubnaha qaba xaalado caafimaad oo adag ama dabadheer oo ay adag tahay in la maareeyo. Waxaan bixinaa barnaamijkan bilaash ah. Maamulaha kiiska ayaa u heellan inuu kaa caawiyo helitaanka daryeelka aad u baahan tahay.
Kaaliyaha maamulaha kiisku waa inuu aqoonsado ikhtiyaarrada daryeelka kale iyo inuu xubnaha ka wacyi galiyo ilaha ay heli karaan. Waxay la shaqeyn doonaan takhaatiirtaada iyo bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka si ay kaaga caawiyaan inaad sida ugu badan uga faa'iideysato daryeelkaaga caafimaad. Waxay ogaadaan nooca daryeelka kuugu fiican adiga waxayna kugu caawinayaan daaweynta. Maareeyayaasha kiisku waxay hubiyaan inaad fahantay waxtarrada qorshahaaga caafimaadka waxayna kaa caawinayaan inaad la qabsato qorshahaaga daryeelka sidii loogu baahdo.
Yaa loogu talagalay Maaraynta Kiiska?
Maareynta kiisku waxay aad ugu faa'iido badan tahay xubnaha qaba cudur dabadheeraad ah, kakan ama ka badan hal xaalad caafimaad sida sonkorowga, niyad -jabka, COPD iyo cudurro kale.
Helitaanka Gudbinta Maaraynta Kiiska
Waa in laguu gudbiyaa adeegyada maareynta kiiska. Waa kuwan siyaabo laguu gudbin karo:
Xubnaha ayaa isu gudbin kara
Daryeel bixiyeyaashu sidoo kale way u gudbin karaan xubin
Isuduwaha gudbinta rugta
Xirfadlaha daryeelka aasaasiga ah ama shaqaalaha rugta caafimaadka
Dhaqtarka takhasuska leh
Udiritaanka qorsheeyaha ka-qaadista
Adeegga Macaamiisha, Caafimaadka Dadweynaha iyo / ama waaxaha Maareynta Kala-guurka
U gudbinta barnaamijka Maareynta Caafimaadka (Ka faa'iideysiga)
Warbixinnada halista sare ee heerka qorshaha
Si aad naftaada ugu gudbiso maareynta kiiska, fadlan buuxi Foomka Gudbinta Maareynta Kiiska.
Haddii aadan hubin in maareynta kiisku adiga kugu habboon yahay, la xiriir waaxdeena Maareynta Kiiska si aad wax badan uga ogaato: 1-866-418-7004 (TTY Relay: 711) laga bilaabo 8:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo, Isniin ilaa Jimce, ama iimayl ku soo dir [emailka waa la ilaaliyay].
Ku Jira Dusha Daawadaada
Ma ogtahay in dawooyinka dhakhtarku qoro qaarkood loo heli karo sahay 90 maalmood ah? Daawada aad u qaadatid muddada-dheer si aad u maamusho caafimaadkaaga waxaa loo yaqaan "daweynta dayactirka." Qalab 90-maalmood ah ayaa kuu sahlaya inaad sii wadato qaadashada daawada aad u baahan tahay inaad sida ugu fiican dareento. Waxaad sidoo kale xaq u yeelan kartaa inaad ku hesho daawooyinkaaga muddada-dheer adoo u maraya bixinta guriga oo lacag la'aan ah.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Sebtember 29, 2021